सृजनशील कसरी हुने ? आफ्नो उत्पादकत्व कसरी बढाउँने ? उपयोगी काइदाहरु - उज्यालो पाटो
हामी वरपर धेरै मानिसहरु छन् जो वर्षौं देखि उस्तै स्थितिमा छन् । तिनीहरूले न त पदोन्नती पाउँछन् न त उनीहरुको तलब बढ्छ । अर्कोतर्फ, हाम्रै वरपर त्यस्ता मानिसहरू पनि छन् जोसँग राम्रो डिग्री छैन, त्यहि पनि उनीहरूले छोटो समयमा राम्रो पदोन्नति पाउँछन् र तिनीहरूको तलब पनि बढ्छ । यो के कारणले गर्दा हुन्छ ? भाग्य ? कसैको आशिर्वाद ? वा व्यक्तिको अब्बलता ?
सामान्यतया मानिसहरु दुई प्रकारका हुन्छन् । एक प्रकारका मानिसहरु हुन्छन्, जसलाई सजिलोको लागि क प्रकारका मानिसहरु भनौँ, तिनीहरुमा यो समस्या हुन सक्छ कि उनीहरु आफुले गरेको काममा रुचि राख्दैनन् । उनीहरुलाई आफैले गरेको काम मन पर्दैन वा उनीहरूसँगमा अन्य समस्या हुन सक्छ जसले आफ्नो काम व्यवस्थित र उत्पादनमुखी भएर गर्न सक्दैनन् ।
अर्कों प्रकारका मानिसहरुलाई हामी ख प्रकारका भनौँ, तिनीहरु कम समयमा नै अधिक प्रगति गर्छन् । उनीहरु आफ्नो काममा रुचि राख्छन् । र, सम्यकों व्यवस्थापन चुस्त र फुर्तिलो किसिमले गर्छन् ।
विद्यार्थीहरुमा पनि यो लागू हुन्छ । कोही विद्यार्थी बेस्मारी पढेर पनि राम्रो अंक ल्याउँन सक्दैन तर कसैले भने कम समय पढेर पनि राम्रो अंक ल्याउँछ । अब तपाईंले अनुमान लगाउनु नै पर्छ कि उत्पादकता के हो ? र उत्पादक हुनु कत्तिको महत्त्वपूर्ण छ ?
यो पढे पछि, तपाईको दिमागमा यो प्रश्न उठ्नुपर्दछ कि के कुनै त्यस्तो प्रविधि छ जुन हामीले हाम्रो जीवनमा लागू गरेर हाम्रो उत्पादकता बढाउन सक्छौ ? त्यहाँ कुनै एक विधि वा निन्जा टेक्निक हुनु पर्छ कि कम काम गर्ने व्यक्ति वा विद्यार्थीले सुपर उत्पादक बन्नको लागि आफ्नो काम वा अध्ययनमा लागू गरिरहेको हुन सक्छ ।
यदि तपाईं कम समयमा बढी काम गर्न चाहनुहुन्छ वा काम गर्ने तपाईंको क्षमता बढाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईलाई यो लेख उपयोगी हुन सक्छ ।
१. आफ्नो बिहानको तालिका बनाउनुहोस्
बिहान सबेरै उठ्नुका धेरै फाइदाहरू छन् र विश्वका सबै सफल व्यक्तिहरू बिहान उठ्न जोड दिन्छन् । बिहान सबेरै उठ्नुकोको प्रत्यक्ष फाइदा के हो भने जब हामी बिहान सबेरै उठ्छौं, हामी बढी समय पाउँछौं र यस समयमा हामी पूरा दिनको तालिका बनाउन सक्छौं जुन हाम्रो उत्पादकता बढाउन मद्दत गर्दछ ।
२. दैनिक व्यायाम गर्नुहोस्
जब हामी बिहान सबेरै उठ्छौं, तब हामी दैनिक व्यायाम गर्न सक्छौं । व्यायाम गर्दा सम्पूर्ण शरीरको मेटाबोलिज्म सक्रिय रहन्छ र शरीरमा आलस्य हुँदैन । यसले शरीरको स्तरमा हामी अत्यन्त ऊर्जावान महसुस गर्छौं । यसले उत्पादकता पनि बढ्छ तर कसरत वा व्यायाम भन्ने बित्तिकै डरलाग्दा र एकदमै शारिरिक बल चाहिने किसिमका भन्ने सम्झिनु हुन्न ।
३. दैनिक ध्यान गर्नुहोस्
आज सारा विश्व ध्यानका फाइदाहरूसँग परिचित भएको छ र विश्वभरका व्यक्तिहरू ध्यान गर्नमा जोड दिन्छन् । ध्यान गर्दा, दिमाग शान्त रहन्छ र तनाव कम हुन्छ । त्यस्तै ध्यानद्वारा मानिसको चित्त स्थिर हुन्छ ।
यदि तपाइँ तपाइको उत्पादकता स्तर उच्च राख्न चाहानुहुन्छ भने दैनिक कम्तिमा १०-१५ मिनेट ध्यान गर्नुहोस् ।
४. तपाईको उत्पादन अवधी पत्ता लगाउनुहोस्
दैनिक एक समय हुन्छ जब व्यक्तिको उत्पादकत्व स्तर धेरै उच्च हुन्छ । यो प्राकृतिक पनि हो र यो बिभिन्न व्यक्तिको लागि फरक फरक हुन्छ किनकि कसैको उत्पादकत्व स्तर साँझको समयमा उच्च रहन्छ र बाँकी समयको तुलनामा यस समय धेरै उत्पादक कार्य गर्न सक्छन् ।
त्यसो भए तपाईको उत्पादकत्व बढाउनको लागि तपाईको उत्पादक अवधि पत्ता लगाउनुहोस् ।
५. तपाइँ के गर्नुहुन्छ र के गर्न मन पराउँनु हुन्छ
अधिकांश व्यक्तिहरूको समस्या यो हो कि उनीहरू आफूले प्रेम नगर्ने काम गर्छन् जुन उनीहरूलाई गर्न पनि मन गर्दैनन् । यसले स्वचालित रूपमा तिनीहरूको उत्पादकता कम गर्दछ । त्यसकारण आफुले के काम मन पराइन्छ भन्ने कुरा महत्वपुर्ढ हुन्छ । स्टिभ जब्सले भनेका छन्, सबै मानिसको फरक मन पर्ने काम हुन्छ । जसलाई त्यो बेलासम्म खोज्नु पर्छ, जबसम्म आफ्नो रुचिको काम भेटाइदैन ।
मात्र यो गरेर हेर्नुहोस्, तपाईंको उत्पादकता स्तर आफै बढ्छ ।
६. व्याकुलता वा विचलनबाट बच्नुहोस्
चाहे तपाई अफिसमा काम गर्ने व्यक्ति हो वा पढ्दै गरेको विद्यार्थी हो, तपाईले अलमल्याउने कुराबाट बच्नु पर्छ ।
विचलन के हो : – तपाईंको मुख्य कार्यबाट तपाईंको ध्यान हटाउने काम नै विचलन हो । जस्तै – सोशल मिडियामा अधिसूचनाहरू जाँच गर्दै, फोनमा काम गर्दा वा पढिरहेको बेला, पब्जी खेल्दै, टिकटक हेर्दै गर्नु पनि विचलन हो।
व्याकुलताले उत्पादकत्व घटाउँछ । त्यसैले उत्पादकता बढाउन व्यकुलताबाट टाढा रहनु धेरै महत्त्वपूर्ण छ ।
७. मनपर्ने संगीत सुन्नुहोस्
काम गर्ने क्रममा मनपर्ने संगीत सुनेर, दिमागले हर्मोनहरू निकाल्छ जसले हामीलाई राम्रो महसुस गराउँछ । यस समयमा, हाम्रो मस्तिष्क डोपामाइन, सेरोटोनिनसँग प्रतिक्रिया गर्छ । यी हार्मोनहरूले हाम्रो उत्पादकत्व वृद्धि गर्न धेरै मद्दत गर्दछन् । त्यसो भए, समय समयमा तपाईंको मनपर्ने संगीत सुन्नुहोस् ।
८. आफैलाई इनाम दिनुहोस्
कसले प्रशंसा सुन्न वा प्राप्त गर्न मन पराउँदैन । सबैजना आफ्नो कामको लागि पुरस्कार लिन चाहन्छन् । यसले मनोबल बढाउँदछ, र कार्यमा बढी प्रेरणा प्रदान गर्दछ । जब तपाईं कुनै ठूलो काम पूरा गर्नुहुन्छ, तब आफैलाई इनाम दिनुहोस् ।
जस्तै – तपाईं विद्यार्थी हुनुहुन्छ, तपाईंले कुनै पाठ्यक्रम पूरा गर्नुभयो वा असाइनमेन्ट पूरा गर्नुभयो । त्यसो भए पछि, तपाईं आफैंलाई केही राम्रो इनाम दिनुहोस् (आफैलाई पुरस्कृत गर्नुहोस्) जस्तै – त्यसपछि आफैंमा ब्रेक दिनुहोस्, आफ्ना साथीहरूसँग कुरा गर्नुहोस्, हिड्न बाहिर जानुहोस्, अलिकता राम्रो खेल्नुहोस् वा तपाईं आफैंले दिन चाहनु भएको केही राम्रो गर्नुहोस् ।
यसले तपाईंलाई ऊर्जाको अर्को स्तर दिनेछ र तपाईंको उत्पादकता बढाउनेछ ।
यी सबै उत्पादकता बृद्धि गर्ने तरिका बाहेक पनि धेरै अन्य तरिकाहरू छन् जसले उत्पादन स्तर बढाउँछन् । जस्तै पोडकास्टहरू सुन्नुहोस् । तपाईंको प्राथमिकताहरू लेख्नुहोस् । भिजुअलाइजेशन गर्नुहोस् । सुत्नु अघि अर्को दिनको योजना बनाउनुहोस् ।
One thought on “सृजनशील कसरी हुने ? आफ्नो उत्पादकत्व कसरी बढाउँने ? उपयोगी काइदाहरु”
Janak Thapa January 9, 2021 at 10:57 pm · Edit